I-Metal Gear V kunye neQokelelo leAmnesia Bayidlale kwiPS Plus ngo-Okthobha | Iindaba zeGajethi
Njengesiqhelo, sithanda ukukuzisela olona lwazi lubalaseleyo malunga nehlabathi leekhonsoli, ngakumbi xa kukho izibonelelo ezibalulekileyo kuyo nayiphi na ivenkile yemidlalo yevidiyo yedijithali kwiqonga ngalinye. Impikiswano enkulu ivele ngeSony xa babhengeza ukonyuka kwamaxabiso ePlayStation PlusAbasebenzisi abambalwa baqala ukukhalaza ngokunyanzelayo.
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi uSony ebefuna ukubuyisela abasebenzisi bayo ukusukela, kwaye Omnye wemidlalo yevidiyo emikhulu yeveki unokufumana simahla ngaphakathi kokubhaliswa kwePlayStation Plus, Le yimidlalo emikhulu uSony asonwabisa ngayo ngenyanga ka-Okthobha.
Kuyinyani ukuba i-Metal Gear Solid V ibe nentengiso ebonakalayo kwiinyanga nje ezidlulileyo, kodwa inkululeko ngokupheleleyo yinto esingakhange siyicinge nokuyicinga. UKonami kunye no-Sony baye babambana izandla nzima ukwanelisa abadlali beqonga, ukusukela ngoLwesibini wokuqala ku-Okthobha uya kuba nakho ukufikelela kuyo yonke le midlalo, ke lungela ukukhuphela isavenge samva nje seBig Boss elandelayo ngo-Okthobha u-3. Yomibini le midlalo ifumene amanqaku anomtsalane kuyo yonke imithombo yeendaba.
Ngakolunye uhlangothi, Ingqokelela yeAmnesia ayizi yodwa, enyanisweni ibandakanya ukwehla okumnyama, iJustine kunye noMatshini weehagu Kumdlalo omnye, ngaphandle kwamathandabuzo asiyi kuswela uloyiko lokusinda kunye nokunye okuninzi, kuba iAmnesia yimbali ephilayo yemidlalo yevidiyo kwaye ngekhe uyiphose. Le yindlela u-Sony azama ngayo ukukholisa abasebenzisi bayo kwaye anike ixabiso kwi-PlayStation Plus, into ehamba kude nangaphaya kokubhaliselwa kwenyanga okuvumela ukuba udlale kwi-Intanethi.
Njengokuba oko kwakunganelanga ngesipho sikwanazo I-RIGS yoLuhlu lweMidlalo yokuLwa kwePlayStation VR kunye neminye imidlalo yePS3 kunye nePS Vita.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Metal Gear V kunye ne-Amnesia Collection ziyidlala kwiPS Plus ngo-Okthobha